Xisbiyo War xasaasi ah kasoo saaray Xaaladda Galmudug + Akhriso | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha GudahaXisbiyo War xasaasi ah kasoo saaray Xaaladda Galmudug + Akhriso
War-saxaafadeed ka soo baxay qaar kamid ah Xisbiyada siyaasadeed ee dalka jira ayaa waxaa looga hadlay War-murtiyeedkii kasoo baxay shirka dib u heshiisiinta Galmudug.
Xisbiyada kala ah Midowga Nabadda & Horumarka “UPD”, Wadajir Party, Ilays, Horusocod Qaran iyo Nabadda ayaa walaac xoogan ka muujiyay War-murtiyeedkii kasoo baxay shirka ee xalay lagu soo xiray Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Galmudug.
Sidoo kale Xisbiyada ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay ka waantowdo tallaabooyinka ay ku doneyso inay afduubto Doorashooyinka Galmudug.
Hoos ka Akhriso Warka.
Madaxweyne Trump oo warqadaha Aqoonsiga ka gudoomay Safiirka Somalia